ရေခဲပြင်ထဲမှာပွင့်တဲ့ပန်း _ ခွန်မြလှိုင်: သူ့နိုင်ငံလို ကိုယ့်နိုင်ငံလဲ ရေနံနဲ့ ဓာတ်ငွေ့ ထွက်ပါတယ်. ကျောက်မျက်ရတနာတောင် အပို ထွက်သေး.. ဒါပေမယ့်???
သူ့နိုင်ငံလို ကိုယ့်နိုင်ငံလဲ ရေနံနဲ့ ဓာတ်ငွေ့ ထွက်ပါတယ်. ကျောက်မျက်ရတနာတောင် အပို ထွက်သေး.. ဒါပေမယ့်???
Dubai-MD5-7-08 - UploadaDocument to Scribd
Read this document on Scribd: Dubai-MD5-7-08
Slideလေးကောင်းတယ် ၊ အဲဒီ hotel သွားဦးမယ် ၊ ထီပေါက်ရင်..
မခွန်မြလှိုင်ခင်ဗျား။ ကျွန်တော်တို့ မ်ြနမာပြည်မှာ ရေနံနဲ့ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ စီးပွားဖြစ် မထွက်ပါဘူးခင်ဗျာ။
a good one, it might be 21st century's babylone....
i hope our country will be like that in one day.....it depends on us....
but, i don't think our current gov could do that....just see recently happened disasters in two countries....we saw how the two govs reacted and took responsibility....
some ppl just compared the way they spoke as "soldier and politician"...no used...just do compare the way they do...
shame on us...(actually shame on them)
i am not sure "law shay" is correct or not, but i knew that myanma gas was sold to thailand...
' ... some ppl just compared the way they spoke as "soldier and politician"...no used ... '
Please read carefully to get the message the author tried to give. (Don't take it direct. Read and think)
၁၈ နှစ်အတွင်းမှာ အတော်ကွာသွားတာပဲနော်။